Usamborega kubudirira kuchisvika pamusoro wako uye kurega kutadza kuchisvika pamwoyo wako. - Ziad K. Abdelnour - Quotes Pedia
Usamborega budiriro ichisvika kumusoro wako uye usamborega kutadza kuchisvika pamwoyo wako. - Ziad K. Abdelnour
Hupenyu hunouya pamwe nekukwira kwayo nokupunzika. Tese zvedu tine zvakasarudzika nzendo dzinotiendesa kunzvimbo dzakasiyana siyana. Kunyangwe hazvo hupenyu hwedu hwakasiyana, pane mamwe maringe enheyo anoshanda kwatiri tese. Isu tese tinobudirira pane imwe nguva uye tese tinosangana nekukundikana zvakare.
Kunyangwe hazvo huwandu hwemataurire edu hwakasiyana, isu tese tinonzwa mufaro patinobudirira nekusuwa kana tikatadza. Zviri asi zvakasikwa kunzwa izvi manzwiro asi izvo zvakakosha kuti isu tinzwisise iwo matanho atinorega aya manzwiro anotibata.
Kana tikabudirira, tinonzwa kudada nezvedu, asi isu kazhinji tinotadza kuzvirereka. Tinogona kufunga kuti tiri pamusoro pevamwe vese, uye vamwe vari pasi pedu. Mafungiro akadaro anonyatsorwadzisa hunhu hwedu uye tinorasikirwa neruremekedzo munzira.
Kana takabudirira, tinofanira kuramba tichizvininipisa uye tinotenda kune vese vakatibatsira kuwana kwatinenge tiri. Tinofanira kuva nekutenda kuti isu tinogona kunge tiri kwatiri nhasi. The moment yatinorega kubudirira kwedu kusvika pamisoro yedu, kudonha kwedu kunotanga.
Isu tinonzwa kuti hapana chingatibata, uye tinoregedza varindi vedu. Hatishande nesimba uye nekuda kwekuzvikudza uku uye kusava nehanya; mumwe anorega kurasikirwa izvo ivo zvavakange vawana.
Saizvozvowo, kana zvikanganiso zvikaitika, hatifanire kuzvipomera mhosva zvakanyanya kuti isu tinoshungurudzika kupfuurira mberi. Tinofanira kutora kukundikana sechidzidzo uye kudzidza kubva pazviri. Iyo inotibatsira kutarisana uye kubata mamiriro mune ramangwana nenzira iri nani.
Kukundikana Kwema Quotes
Kukundikana Quotes Mifananidzo
Akakurumbira Kubudirira Quotes
Kukurira Kukundikana Quotes
Quotations Yekubudirira Uye Kukundikana
Quotes Pamusoro pekutadza
Quotes Pamusoro Pemwoyo Nepfungwa
Quotes Pamusoro pekubudirira Uye Basa Rakaoma
Quotes On Kubudirira
Kutaura pamusoro peKubudirira Uye Kukundikana
Kubudirira Quotes Uye Kutaura
Kubudirira Quotes Mifananidzo
Sosaiti iri kuzokutonga zvakadaro, saka ita chero chaunoda kuita. - Ziad K. Abdelnour
Sosaiti iri kuzokutonga zvakadaro, saka ita chero chaunoda kuita. - Ziad K. Abdelnour…
Iva nesimba rakakwana kuti umire wega, wakangwara zvakakwana kuti uzive paunenge uchida rubatsiro, uye shinga kuti uikumbire. - Ziad K. Abdelnour
Iva nesimba rakakwana kuti umire wega, wakangwara zvakakwana kuti uzive paunenge uchida rubatsiro, uye shinga zvakakwana ku…
Usavimbise kana iwe uchifara. Usapindure kana wakatsamwa. Uye usasarudze kana wakasuruvara. - Ziad K. Abdelnour
Usavimbise kana iwe uchifara. Usapindure kana wakatsamwa. Uye usasarudze kana wakasuruvara. - Ziad…
Tsvaga ruremekedzo, kwete kutariswa. Inogara kwenguva refu. - Ziad K. Abdelnour
Izvo zvakakosha kuti unzwisise kuti munhu haakwanise kusvika pakakwirira muhupenyu chete nekukwezva hunhu kana ne…
Chero ani arikuedza kukudzikisa atove pasi pako. - Ziad K. Abdelnour
Uchawana vanhu vazhinji muhupenyu hwako vanozoramba vachikutongera pane zvese…